कोरोना प्रकोपबारे नबिल बैंकले बनाएको सन्देशमुलक भिडियो भाइरल, हेर्नुहोस भिडियोसहित — Sanchar Kendra
१अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कति पाउनेछन् तलब, कस्ता हुनेछन् सुविधा-भत्ता ?
२२५ वर्षीय समृत खरेलले सर्वोच्चमा गरेकाे १५ मिनेट लामाे बहस सुनेर न्यायाधिश दंग, किन मागियाे लिखित भर्सन ?
३ओलीले पत्रकारलाई झपार्दै भने- तिमि हैन, तपाई लेख्नुहोस
४सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेलको भिडियो प्रमाणका रूपमा पेस गर्न तयार छु- भट्टराई
५ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकाल्ने घोषणा
६थप ३३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४ को मृत्यु
७हामी रातो झण्डा फहराउने हौं, कालो झण्डा बोक्ने होइनौं- ओली
८प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट- गण्डकी प्रतियोगिताबाट बाहिरियो
९दुई दिनदेखि हवाई उडान ठप्प
१०काठमाडौं आइपुग्यो कोरोनाविरुद्धको १० लाख डोज खोप
११नेपाल प्रहरीले ओली सरकारसँग किन माग्यो १२ अर्ब रुपैयाँ, यस्तो छ कारण
१२उपकुलपतिले अश्लील बोलेको भन्दै मप विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुखले दिए सामूहिक राजीनामा
४भारतले नेपालमाथि लगायो फेरि यस्तो प्रतिबन्ध, नेपाली जनता मा’रमा पर्ने निश्चित
७काठमाडौंमा ८ जना पैदलयात्रीको मृत्यु, थप विवरणसहित
८आफुबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया
११ओली सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो निर्णय, राति १२ बजेबाट लागु हुने
कोरोना प्रकोपबारे नबिल बैंकले बनाएको सन्देशमुलक भिडियो भाइरल, हेर्नुहोस भिडियोसहित
काठमाडाैं । नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं शुरु भएको छ । तर धेरै नेपालीको घरमा यसपटक दशैँको रौनकै छाएको छैन। देशमा दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । यहि कोरोना संक्रमण र दशैँको सन्दर्भलाई लिएर नबिल बैंकले बनाएकाे एउटा सन्देशमुलक भिडियो भाइरल भएकाे छ । नबिल बैंकले बनाएको ३ मिनेट २६ सेकेन्डको उक्त भिडियोले कोरोना संक्रमण भए पनि यसलाई सजिलै जितिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
भिडियोमा एउटा परिवारमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई होम आइशाेलेसनमा रहेका बेला हौसला मायाको कमी हुन नदिइ उसको रेखदेख गर्न सकिए चाँडै बिरामी ठिक हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको छ । पारिवारिक माया, स्नेह र अपनत्वको भाव भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ । नबिल बैंकले शनिबार घटस्थापनाका दिन उक्त भिडियो आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
भिडियाेमा केछ ?
घरमा श्रीमान आइसोलेसनमा छन् । कोरोना परीक्षण गरेपछि रिपोर्ट पोजेटिभ आउँछ । उनले यो कुरा आफ्नो श्रीमतीलाई सुनाउँछन् । श्रीमानको कुरा सुनेपछि श्रीमती आत्तिन्छिन् र पनि सम्हालिन्छिन् । केही हुँदैन भनेर श्रीमानको मन बलियो बनाउँछिन् ।
छोरीलाई साथीको फोन आउँछ । साथीले नयाँ कपडाको कुरा गरेपछि उनको आँखामा आउने आसुले जोसुकैलाई पनि भावुक बनाउँछ । बुबाको कोभिड रिपोर्ट पोजेटिभ आएको कुरा उनले साथीलाई सुनाउँछिन् । साथीले पनि उनलाई सम्झाउँछिन् । रोइरहेकी छोरीले आमाको अगाडि आसु लुकाउन प्रयास गर्छिन्, तर सक्दिनन ।
श्रीमानले डेभिट कार्ड मागेर सामान अर्डर गर्छन् र सामान घरमा आउँछ । झोलामा नयाँँ कपडा देखेपछि छोरी निकै खुसी हुन्छिन् । यसमा देन्खिन्छ उनको बालमनोविज्ञान । खुसीमा रमाउँदै जब छोरी बाबुको अंगालेमा जान खोज्छिन् र बाबुले नआउन इसारा गर्छन् यो दृष्यले सबैको मन छुन्छ ।
दशैंको टीकाको दिन छोरीले बुवाको रिर्पोट नेगेटिभ आएको हो नि भनेर सोध्दा आमाले २ पटक नेगेटिभ आउनुपर्ने बताउँछिन् । जब रिर्पोट नेगेटिभ आयो भन्दै आमाछोरीको बिचमा श्रीमान/बुवा आउँछन् अनि देखिन्छ त्यो परिवारको खुसी । बुवाले छोरीलाई अंगालोमा बाध्छन र त्यसपछि दशैंकाे टीका लगाइदिन्छन ।
कोरोना महामारी बढिरहेका बेला सबै सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ भन्ने सन्देशसहितको भिडियोमार्फत नबिल बैंकले प्रविधिमैत्री बैंकिङ प्रणालीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ । नबिल बैंकले चाडपर्व र कोरोना महामारीमा आधारित भएर ल्याएको भिडियोलाई यतिबेला धेरैले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् । हेर्नुहोस भिडियो
चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडाैं महानगरका ६९ पूर्वाधार सम्पन्न
सुन-चाँदीको मूल्य बढ्यो, तोलामा कति पुग्यो ?
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोवार
स्टार्टअप आइडिया कलको युवा उद्यमी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु
कीर्तिपुर नयाँबजारमा मेगा बैंकको नयाँ शाखा संचालन
सुनको भाउ फेरी घट्यो